အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃)
Posted by kai on May 22, 2013 in Editor's Notes | 15 comments
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၁၀၀၀ခန့်က ပုဂံဒေသသည် စိမ်းလန်းရာသီ တောကိုမှီကာ ရှိခဲ့ပေလိမ်မည်။ပြည်ပုဂံသည် ဧရာဝတီကိုမှီကာ ရာသီညီမျှ မိုးလည်းဖျဖျ ရှိခဲ့ပေလိမ့်မည်။
တောင်ပေါ်ကျမိုးရေတို့သည် မြောင်း၊ ချောင်းအသွင်ပြောင်းကာ တသွင်သွင်စီးခဲ့ပေလိမ့်မည်။
တောင်ကျချောင်းရေကို တူရွင်းတောင်ခံကာ တဖက်ပိတ်ကန်ဘောင်ဆည်၍ ရေဖမ်းခဲ့ကြပေလိမ့်မည်။ကြာပန်းစုံစုံ ငှက်အုံအုံနှင့် သာဝတိံသာက နန္ဒာကန်သဖွယ်ဖြစ်အောင် ရှေးမြန်မာတို့ ဖန်ဆင်းခဲ့ကြပါသည်။
ဤမြန်မာ့ပထမကဗျာကို ပုဂံခေတ်က ရေးခဲ့သည်။ ၁၀ရာစုမတိုင်ခင်ကတည်းက မြန်မာတို့ ကျောက်ဆည် ၁၁ ခရိုင်တွင် မြစ်ကိုသွယ်တူးမြောက်ဖောက်လယ်ဧကတို့ဆောက်ခဲ့ဖူးသည်။ရှေးမြန်မာတို့၏ ရေလွှဲ ဆည်ဆောက် သဘာဝတရားကို လူကူထောက်တတ်သော ဇာတိပညာ မြင်နိုင်ပါလေသည်။
ရေချို မြေဆီ ဂေဟ
မြစ်တို့ရှိငြား ယခုခေတ်ကမ္ဘာမြေ၀ယ်ရေချိုငတ်သော လူနေတိုင်းနယ်တို့များလှပါ၏။ သန်း၇ထောင်ကျော်နေပြီဖြစ်သော ကမ္ဘာလူသားထုအများစုသည် ရေချိုရေသန့်ငတ်လျှက်သာလျှင်နေလေသည်။ မြစ်ကန်ချောင်းမြောင်းတို့သည် ရေချိုစို့ချင်ရှာသော လူသားတို့ကို အပြည့်အလုံ
လူသားတို့သည် ကမ္ဘာမြေကို လွန်ပူဖြစ်ဖေါက်ခဲ့၏။ ရေကိုထုတ်၏။ ထိုမျှမကကမ္ဘာ့မြေဆီဖြစ်သော ရေနံကိုဖေါ်သည်။ စုပ်သည်။ ထုတ်သည်။ မီးတင်ရှို့သည်။ မြေဆီလွှာကိုစားသည်။ကိလေသာပေါကြထောကြပါလေသတည်း။
အနုဇီဝသက်ရှိသတ္တ၀ါတို့၏ ရုပ်ကြွင်းလောင်စာခေါ်ကြလေသော မြေဆီရေနံ တို့မီးတင်ရှို့ခံရသော် အလျှံငြီးငြီးမီးလျှံဖြစ်ပြီးနောက်ဝယ်အဆိပ်ငွေ့မှုန်တို့ကျန်ရစ်ပါ၏။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်၊ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်တို့သည်
ကမ္ဘာကိုပူနွေးစေသည်။ ဂေဟစနစ်ကိုထိခိုက်စေသည်။ ကမ္ဘာမြေကျမ်းမာရေး လူနေကျမ်းမာရေး ယိုယွင်းကျဆင်းစေပါသည်။
သက်သေသာရကအားဖြင့် ကမ္ဘာ့ပူနွေးလာမှု ထောင်စုနှစ်အတွင်းအပူဆုံးဒီဂရီရောက်လာမှု၊ မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်မှုအတွင်း ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်လေထုတွင်အများဆုံးပါဝင်လာမှုတို့က အချက်အလက်အဖြစ်ပြနေသည်။
ပျမ်းမျှအပူချိန်တက်လာသော ကမ္ဘာမြေ၀ယ်အာတိတ်စက်ဝိုင်းရေခဲပြင်သည် ဟုန်မြင့်ပျော်ကျလျှက်ရှိ၍ ဟိမ၀န္တာတောင်မြင့်အပါအ၀င် ကမ္ဘာ့ရေခဲများလည် ပုံမှန်ထက်ပို၍ ပျော်ကျလျှက်ရှိပါသည်။ ၁၀နှစ်ခြား၊ အနှစ်၂၀ခြား။ အနှစ်၅၀ကြား ၁၀၀ကြား ခွဲရိုက်
မှတ်တမ်းထားသော ဓါတ်ပုံတို့က ကောလဟလမဟုတ် အမှန်တကယ်ဖြစ်နေပါကြောင်းပြသည်။ သတင်းဓါတ်ပုံတို့ကိုယ်နှိုက်သည် မလှည့်စားပါ။
ဟိမ၀န္တာတောင်တန်းနွယ်ဖြစ်သော ခါကာဘိုရာဇီနွယ်တောင်တန်းများ၊ ကချင်မြောက်
ဖျား ဆီးနှင်းခဲများလည်းရေဝေရေလဲတောကြီးများသုဉ်းလာခြင်းနှင့်အတူ ယခင်ခေတ်ကာလများနှင့်မတူခြားနား သွင်သွင် ပျော်ကျနေမည်မှာ သေချာလှသည်။
ယခင်၁၀စုနှစ်အတွင်း ဧရာဝတီ၏ ရေကြီးရေလျှံပုံမှန်ထက်များခဲ့ခြင်းက ထောက်ကူပေးသော အချက်အလက်များဖြစ်ပါ၏။
ဧရာဝတီသည် ဟိမ၀န္တာတောင်ကြောတောင်တန်းဖြစ်သော မြန်မာပြည်မြောက်ဖျားရေခဲတောင်ဒေသကိုမြစ်ဖျားခံသည်။
အဆိုပါတောတောင်ဒေသ၏ ပိတ်ဆီးထူထပ် ဆီးနှင်းခဲများ ရေဝေရေလဲတောကြီးများသည် ဧရာဝတီ၏မိခင် အင်မိုင်ခ (မေခ)၊မလိခတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သည်။ ထိုမှသည် ၁၃၅၀မိုင် ခရီးကို မြန်မာ
ပြည်တလွှားထိုးခွဲဖြန့်ကျက်ကာ သွားခဲ့လေသည်။ ကျောက်ဆောင်တွေ့သော်ထွင်းစားသည်။ ချင်းတွင်း၊ရွှေလီ၊မြစ်ငယ်နောင်ညီတို့ပူးဝင်လာသော် ပေါင်းသည်။ ပုပ္ပား မီးတောင်ကိုတွေ့သော်ကွင်းသည်။
တောင်မြောက်တန်းလျှက်ရှိရကား ကမ္ဘာ၏အပူချိန်ရာသီခွင်နယ် ၃ခုနင်းလျှက် နှစ်သောင်းသိန်းချီတသွင်သွင် စီးဆင်းခဲ့သည်သာတည်း။ ဆီးနှင်းရာသီ တောင်ပေါ်အအေးဒေသ
ကအစပြုခဲ့သည်။ ကန္တာရသဖွယ် အပူအညာနယ်ကို ဖြတ်သည်။ ပင်လယ်ဒီရေ၀င်ထွက်သောဒေသ၀ယ်နှုန်းမြေတို့ချကာ အကြေမြစ်ဝကျွန်းပေါ် ၌တည်လေသည်။
သီးနှံများကိုပေါများဖွံ့ဖြိုးစေသည်။ လူသတ္တ၀ါအပါအ၀င် အပင်သက်ရှိတို့အတွက်မရှိမဖြစ် ရေချိုပင်တည်း။
ယခုနှစ်ပိုင်းတွင် မိုးသွင်သွင်ရွာလျှက်မှ ရေချိုသောက်ရန်မြစ်ချောင်းကန်တို့ပါးလာသည့် အဖမြေမြန်မာပြည်ကို မြင်ရ၏။ မြစ်ကြီးအသွယ်သွယ်ဖြတ်စီးဆင်းနေလျှက်မှ ရေချိုရှား၍ရေခပ်ထွက်သော ကျေးလက်တောရွာ တောင်သူလယ်သမားတို့၏ဓါတ်ပုံတို့ အင်တာ
နက်အတက်စိတ်လာသည်။ရေချိုတခွက်၊ပုံးတ၀က်အတွက် အချိန်လုပ်အားမမျှအောင် ပေးဆပ်လာကြရသည်။
အမိဧရာဝတီတွင်သဲသောင်တို့ သာမန်ထက်ထွန်းသည် မြစ်ကောသည်ကိုလည်းတွေ့ရမည်။ မြောက်ပိုင်းဒေသတို့တွင်ရွှေတူး ကျောက်ဖေါ်သမားတို့၏ တန်ချိန်သိန်းသန်းချီနေ့တဓူဝဖျော်ချနေသော နှုန်းမြေများ၊ ဓာတုရည်များစီးဆင်းနေသည်ကို ဖတ်ကြရမည်။
ယူအက်စ်၏ ပြည်နယ်၅ခုဖြတ်ဆင်းသော မိုင်၁၄၅၀ရှည်သည့်ကိုလိုရာဒိုမြစ်ကို ပိတ်ဆည်ထားသော ဟူးဗားရေကာတာကို ရောက်ဖူးကြည့်ဖူးပါသည်။
ဂရန်းကန်င်ညွှန်တပါတ်ပါတ်ရင်း ကိုလိုရာဒိုမြစ်တလျှောက်ရေပိတ်ဆည်ကာ လျှက်စစ်ထုတ်နေသော စက်ရုံကြီးများကို အံ့သြရင်သတ် မျှော်ကြည့်ဓါတ်ပုံရိုက်ဖူးးသည်။ ကိုလိုရာဒိုတွင် ဆည်ကြီး၆ခုရှိကာထား၍ ရေချိုလည်းပေးသည်။ လျှပ်စစ်လည်းဝေသည်။ မြစ်တလျှောက် ရုခင်းသာကြည့်ရင်း လာရောက်လည်ပါတ်စီးနင်းကြသူများထံမှလည်း ငွေတို့ယူပါလေသည်။
လူသည်သာလျှင်ကောင်းကင်တမွတ်ကြယ်ကိုဆွတ်သည်။ တောင်ကိုဖြတ်ဖောက်လှိုင်ခေါင်းဆောက်၏။ ပင်လယ်ကိုဖြတ် ကြိုးသွယ်တန်း၏။ မြစ်ကိုပိတ်ဆို့ ဆည်လုပ်ဖို့သည်။
ဤခေတ်တွင်ကမ္ဘာ့မြစ်ကြီးတိုင်း(တိုင်း)သည် လူသားတို့၏ ထိန်းချုပ်မှုတို့ဖြစ်တည်လေသည်။ လူတို့စွမ်းအားဖြင့် လူ့အကျိုးပြုရန် ထိန်းချုပ်ကြသည်။
လူသားတို့သည် မိခင်သဘာဝကို ဖျက်ချခဲ့ကြလေသည်။ တိုးတက်ခဲ့ပြီးသော ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများက စိတ်ကြိုက်ပြုခဲ့ပြီးလေပြီ။ စက်မှုတော်လှန်ရေးကာလဖြတ်တက်ကြရင်းပြုခဲ့ကြသောအကျိုးဆက်တို့ကြောင့် သူတို့ချမ်းသာကြွယ်ဝ ဓနဥစ္စာများခဲ့ပါလေသည်။ သူတို့လူ
ယခုခေတ်တွင်မူ ပျက်ခြင်းတရားများကို ပြန်ပြင်သူကပြင်သည်။ ဖျက်သူပြင်သူကယ်သူ မ,သူတို့၏အားပြိုင်မှုဝယ် လူသားတို့ထိမ်းချုပ်မှုတို့ အခြေကျခဲ့ပေပြီ။ အားပြိုင်မှုတို့ပြုရင်းဖြင့် ရပ်တန့်၍ကားမနေ ရှေ့သို့သာ ချီလေတဲ့ချီလေ နှင်နေကြပါလေ၏။
ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံကြီးတို့သည် သဘာဝဂေဟစနစ်ကို ထိခိုက်အောင် ပြုလျှက်သားမှ သံကုန်အော်သည်။ အသံကိုခြစ် အနှစ်မပါ ထပ်ခါအော်လျှက် ရုပ်ကြွင်းလောင်စာဆီအသုံးလည်းမလျှော့။ ကျောက်မီးသွေးကာဗွန်ထုတ်မှု
လည်းမချ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတို့ကား ထပ်လျှက်သာ ပြုလျှက်သားမှ မဖွံဖြိုးသေးသော နိုင်ငံငယ်တို့ကိုမူ ညှစ်၍ဖျစ်၍ ဖြတ်၍ရိုက်ထည့်ခြင်းများလည်းပြုပါသည်။
မီဒီယာကိုသုံးပြီး ပြင်စေသည်။ ပါဝါအင်အားသုံးပြီး ခိုင်းစေသည်။ ငွေအင်အားသုံးပြီး လုပ်ရမည့် ကာဗွန်ကြေးအခွန်ပေးခြင်းကောက်ခြင်းကိုမူ အသံတစ်လျှက်သား ရပ်နေသတည်း။
တခုခုလုပ်ဖို့လိုနေပါသည်။ ထိုတခုခုသည် ဆည်ဆောက်မြေဖို့၍ရေချိုကို လူသားအင်အားဖြင့်ထိမ်းချုပ်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သောင်တူးနှုန်းဆည်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အကုန်တပြိုင်တည်းလုပ်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ချိုင်းနားပြည်ကိုငှားလုပ်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အိန္ဒိယပြည်အပ်ခြင်းလည်းပြုနိုင်သည်။ အမေရိကားနိုင်ငံဖြင့်ဖက်စပ်လည်း ထုတ်နိုင်သည်။ တပါးနိုင်ငံတို့သည် မိမိအကျိုးစီးပွားစပ်မှသာလုပ်မည်ကိုကား သိနှင့်ရမည်။
လိုချင်သောအရာများသည် အမြတ်အပြည့်ဖြင့်မိုးပေါ်မှအလိုလိုကား ကျမလာ။ ပေးရမည်။
ယူရမည်။ အပေးအယူရှိရညှိရပေမည်။ အကျိုးဆက် အပြစ်အဖျက်တို့ကို နိုင်ငံတကာပညာရှင်အဖွဲ့အစည်းများဖိတ်ခေါ်တွက်ချက် ထုတ်ပြန်ရမည်။
သဘာဝကို သဘာဝ အတိုင်းထားခြင်းအားဖြင့်ကား ပျက်ယွင်းလာသော ဂေဟစနစ်ကို မထိန်းချုပ်နိုင်..။ ။
သောင်တူးနှုန်းဆည်ခြင်း မဟုတ်ပါ သောင်တူးနုန်းဆည်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သဘာဝကို သဘာဝအတိုင်းထားခြင်းဖြင့် ပျက်ယွင်းလာသော ဂေဟစနစ်ကို မထိန်းချုပ်နိုင် ဆိုတော့
သဘာဝ အတိုင်းရော ရှိသေးရဲ့လားဟင်
သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်အောင် ပြန် လုပ်ရမှာပါ
သဘာဝကိုလူစွမ်းအားနဲ့.. ရင်ဆိုင်ကြဖို့.. အချိန်ကျပြီလို့ဆိုလိုရင်ပါ..။
တကယ် ကယ်တင်ကြဖို့ …
တကယ်..လိုပါကြောင်းးးတကယ် .. ပြောတဲ့လူတွေနဲ့
တကယ် ..လုပ်မယ့် ..သူတွေ..လည်းး
တကယ်လုပ်မယ့်သူဆိုတာထက်.. တကယ်မလုပ်ပဲ..သံယောင်လိုက်အော်နေကြသူတွေ.. တကယ်ငြိမ်ပေးဖို့…(အခုအချိန်မှာ) တကယ်လိုနေတယ်ထင်ပါကြောင်း…
မြန်မာတင်မက.. ကမ္ဘာမှာပါရှားလာပြီ..အန်ကယ်ကြီးရေ.. အခုလုပ်ပြီးသွားတဲ့.. လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့တော်ဝန်ရွေးကောက်ပွဲမှာ.. အကြီးဆုံးပြဿနာက.. အဲဒီရေချိုပြဿနာပဲ..။
လာမယ့်၁၀စုနှစ်ထဲ..ဧရာဝတီရေရရာ.. မြောက်ဖျားဒေသတွေမှာရှိတဲ့…. နှင်း၅၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်..ပျော်ကျပြီး.. ကုန်သွားလိမ့်မယ်..
အဲဒီအခါကျ.. ပြည်နယ်တွေ.. ရေလုစစ်ဖြစ်ကြမယ်ပေါ့.. ။
Mount Everest’s Ice Is Melting – SKYE on AOL
May 14, 2013 – Glaciers in the Mount Everest region have shrunk by 13 percent in the last 50 … But shrinking glaciers in the rest of the Himalayas have drawn …
ရန်ကုန်ကို စင်္ကာပူရ လို လုပ်မယ် ဆိုပီး
ရန်ကုန်က အာရှရဲ့ ဗင်းနစ်စ် ဖြစ်နေပြီတဲ့ ..
မြောင်းရေလျှံလို့ အော်ကြတဲ့အချိန်မှာ ရေချိုရှားတာ ဖတ်ရတော့
ရေချိုတွေဖြစ်တဲ့.. အာတိတ်ကရေခဲတွေပါ…အရေပျော်လာတာမို့.. ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်က.. နကိုထက်ပိုတက်လာပါလ်ိမ့်မယ်..
ရေချိုတွေဟာ.. ရေငံနဲ့ရောတဲ့အခါ.. လူတွေသောက်သုံးလို့မရတော့ပါဘူး..
အဲဒီရေချိုတွေကို..ရေခဲကနေ ပျော်လာချိန်.. မိုးရွာချိန်.. ထိမ်းသိမ်းထားနိုင်ရင်တော့.. ကောင်းတာပေါ့…။
Scientific American-by Mark Fischetti-May 14, 2013
Hardly. Even though Sandy’s storm surge was exceptionally high, if sea level rises as much as scientists agree is likely, even routine storms could cause similar …
ကျုပ်သိတာတော့ ဘာလုပ်ချင်လုပ်ချင် ပိုက်ဆံရှိအောင် အရင်လုပ်ရမယ်……
ပိုက်ဆံမရှိလို့ ကိုယ့်သမီး ညကျောင်းသွားတက်တာကို မတားဖြစ်နိုင်တဲ့အဖြစ်တွေ တပုံကြီးပါ…
အမှန်တရားကို တွေ့လာရင်လဲ မသိယောင်မမြင်ယောင်မဆောင်ပဲ လက်ခံကြပါ….
အဲဒီတော့မှ .. ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေ တကယ်လုပ်နိုင်လာလေ ဖြစ်မှာဖြစ်ကြောင်း…….။
မွဲတေနေတဲ့တိုင်းပြည်မယ်… (ချမ်းသာပြီးတဲ့)အနောက်နိုင်ငံတွေမြှောက်ပေးတဲ့အတိုင်း..” ဂေဟ”အော်ပြီး.. “သဘာဝ”နေယုံနဲ့.. လူတွေ”၀မ်းဝ”လာမှာမဟုတ်ဖူးလို့လည်း.. ပြောလိုရင်းပါ…ဦးပါရေ…
တချို့ကိစ္စတွေမယ်.. တိုင်းပြည်အတွက် .. အနာဂါတ်အတွက်… စတေးရတာတွေရှိတယ်…
ဒါကို.. မျိုးချစ်စိတ်လို့… ခေါ်ချင်ခေါ်လို့ရပါတယ်…။
နိုင်ငံရေးအတွက်စတေးရင်.. ဗြဟ္မာ့ပြည်တန်းရောက်ကြောင်း… တရားဟောရမလိုလို…
အဲဒါကို ပြောတာပါပဲ သူကြီးရေ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အမြတ်တနိုး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာ
အင်မတန်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းလှပေမယ့် ( တော်တော်လဲနားထောင်လို့ကောင်းပေမယ့်)
အဲဒါဟာ- ဒဲ့ ပြောရရင်- သူဌေးစားတဲ့သူဌေးစာပါ…။
ကျုပ်တို့နိုင်ငံက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို နှုံးပြည့်စံပြည့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်လောက်အောင် မချမ်းသာပါဘူး..။
ဒါကြောင့်ပစ်စလက်ခတ် ပိုးစိုးပက်စက် လုပ်ပစ်ရမယ်လို့မဆိုပါဘူး…
ပတ်ဝန်းကျင်ကို လဲ တတ်နိုင်သမျှအစွမ်းကုန်စောင့်ရှောက်ရင်း
ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ တကယ်အရေးကြီးတဲ့တကယ့်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ လဲထိုက်တာတွေမှာတော့ တန်သထက်တန်အောင် သာသထက်သာအောင်စဉ်းစားပြီး
( လဲ ) သင့်သလောက် ( လဲ ) ရပါလိမ့်မယ်။
အခုမျိုးဆက်တွေကတော့ အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေထက် ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခုမျိုးဆက်တွေ လုပ်သာကိုင်သာရှိမှ အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက် လိုအပ်ရာရာတွေ ပြင်ဆင်ဖြည့်ဆည်းခဲ့နိုင်မှာကြောင့်ပါဗျား…
ဒီအကြောင်းပြောရင် မပြီးနိုင်ပေမယ့် အချိန်မရသေးလို့ နောက်မှပဲ….
ပခုက္ကုလောက် သွားကြည့်လိုက်ပါ တံတားကြီးက ကုန်းပေါ်ဆောက်ထားတဲ့ အတိုင်းးပဲ၊ ရေလမ်းကြောင်းက ဝါးနှစ်ပြန်တောင် မရှိချင်ဘူး၊ တော်တော်ဆိုး သွားပြီ၊ အစိုးရ လုပ်ချင်စိတ်ရှိမှ ဖြစ်မယ့်ကိစ္စ တွေ ထင်ပါ့ဗျာ၊ အစိုးရလည်း တခြားကိစ္စ ပိုရှုပ်နေတာလား ရှုပ်အောင်လုပ်နေတာလား မသိဘူးဗျို့၊ ရေသန့် ဝယ်သောက်ကြ ပေါ့ဗျာ ;p
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းတာကို ရာနှူန်းပြည့်လိုက်နာစရာမလိုပေမဲ့ မြစ်ဆုံဆည်ကိစ္စမျိုးမှာတော့ ပညာရှင်တွေနဲ့ သေချာတိုင်ပင်ပြီး လုပ်သင့်မလုပ်သင့် ဆက်ရမယ်ထင်ပါတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်ကို လူသားကဘဲ ပြုပြင်ပြီး အနာဂတ်အတွက်ကောင်းမွန်အောင်ဖန်တီးရမှာပါ။
အင်္ဂလိပ်လက်ထက်က Irrwaddy Flotilla company က မြစ်ကြောင်းတွေ သဘောင်္သွားလို့ရအောင် သောင်မှန်မှန်တူးတယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်။
တစ်ချို့ဒေသတွေမှာလည်း မြစ်ကြောင်းကိုထိန်းနိုင်အောင် ရေထိန်းနံရံတွေဆောက်ရမှာဘဲ….ဒါပေသိ budget…budget
ကျုပ် ဒီရက်ပိုင်း အတွင်း သတိထားမိခဲ့တာ တစ်ခုကတော့
Admin kai ဆိုပြီး
မပြောင်း စဖူး ပြောင်းခဲ့သေးလားလို့ …